Ciise Masiix iyo Calaamaddii Yoonis - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Qurayshta (ama Quryashi) waxay ahayd qabiilka Carabta ah ee gacanta ku hayey Makka iyo Kabcada, waxayna ahayeen qabiilka uu ka yimid nabi Maxamed. Suuradda Quraysh (Suuradda 106 – Quraysh) waxay sharaxaysaa axdiyada wanaagsan ee ay Qureesheedu ku raaxaysteen.
Caadaysigii Qureesheed.Ay ka caadayeesheen Safarka Xagaaga iyo Jilaalka darteed.
Suuradda Quraysh106: 1-2
Laakiin Suradda Yoonis (Suuradda 10 – Yoonis) ayaa ka sheekeynaysa wixii dhacay markii nebi Maxamed fariinta u qaaday farriinta Qureeshta,
Suuradda Yunus 10: 2
Markii la diidey fariintiisii, Surah Al-Qamar (Surah 54 – Dayax) wuxuu uga digay Qurayshta inay la kulmaan …
Ma Gaaladinnan baa ka khayr badan kuwaas mase dambi la’aanbaa idiin ku sugan Kutubta.Mase waxay dhihi koox guulaysan yaanahay.Waa la jabin kooxda, Dabadayna jeedin.Saacadda (Qiyaame) yaa ballan u ah, Saacadduna iyadaa daran oo khadhaadh.
Suuradda Qamar 54: 43-46
Waxaa kale oo Surada Yoonis sharaxaysaa in inkastoo nebiyada badankood iska dhega tireen dhageeystayaashooda(sida Qurayshta), haddana waxaa ka reeban – Nebi Yoonis
Nebi Yoonis waxaa loo diray dad shisheeye.walina way heleen farriintiisa. Laakiin isagu ma uusan aqbalin kaalintiisii ​​isagoo isku dayaya inuu ka cararo waxaa liqay kalluun weyn isagoo nool. Suuradda Al-Qalam (Surah 68 – The Pen) waxay sharaxayaa sida uu isagoo kujiro kalluunka uu uga toobadkeeyay amardiidadiisii, isla markaana dib loogu soo celiyey nebinimadiisii.
Ku samir Xukunka Eebe hana noqonin sidii Saaxiibkii Xuudka (Mallayga Yuunus) markuu naadiyey Eebihiis isaga oo walbahaarsan.Haddan naxariista Eebe haleelin waxaa lagu tuuri lahaa Cidlo (bannaan) isagoo la dagaalay.Waxaase doortay Eebihiis wuxuuna ka dhigay kuwa wanaagsan.
Suuradda Al-Qalam 68: 48-50
Sidii Nebi Maxamed, Ciise Maxiixina wuxuu u tagay dadkiisii ​​(Yuhuuda) oo iyagu waxay ku eedeeyeen sixir oo fariintiisii ​​way diideen. Markaa Ciise Masiix wuxuu sidoo kale uu nabi Yoonis ogu yeeray sida calaamad.Maxaase loogala jeedaa calaamad?
Ciise Masiix dadkiisa aya wax ka wediiyay awoodiisa.
Waxaan aragnay siday Injiilka ugu qoran tahay waxbaristii, bogsiintii iyo mucjisooyinka Ciise Masiix. Had iyo goor inaga iyo dhageeystayaal kaleba wuxuu u casuumi jiray inay helaan wuxuu ogu deeqayo.Wuxuu ogu deeqay Biyaha nolosha,wuxuu u naxariistay dambiilayaasha,wuxuu raadiyaa kuwa lumay. Oo dhammaan wuxuu ku casuumay kuwa doonayo inay galaan Boqortooyada Ilaah.
Xiligaas Waxbaristiisa waxaa ku wareeray hoggaamiyeyaasha diinta (waxaana ka mid ahaa imaamyada). Gaar ahaan waxay isweydiinayeen Amarka uu wato. Tusaale ahaan, dhammaan isagu runtii awood ma u lahaa inuu u bixiyo naxariista Eebbe dadka dambiilayaasha ah, iyo awoodda ma u leeyahay inuu ku bixiyo gelitaanka Boqortooyada Ilaah? Markaana hoggaamiyeyaashii diinta ayaa waydiiyey calaamad uu ku caddeeyo xukunkiisa. Injil waxaa ku qoran wada hadalkoodii waa:
Ciise wuxuu tilmaamayaa Calaamadahii Yoonis (Yunus) waa sida ku qoran
Matayoos 12: 38-41
Waqtiga Taariikhda ee Nbi Yoonis
Ciise Masiix wuxuu ku jawaabay isagoo tilmaamaya nebi Yoonis (oo sidoo kale loo yaqaan Yunus ama Yunis). Waxaad ku arki kartaa jadwalka hoosta ku yaal in nabi Yuusus noolaa 800 sano ka hor Ciise Masiix.
Nebi yoonis jaantuus taariikheed tusaya isaga iyo Nebiyadii Axadigii hore
Nabi Yoonis iyo waxa uu Quraanka ka sheegaayo.
Yoonis wuxuu qoray Kitaab ku jira Qoraaladii nabiga. Laakiin Quraanku wuxuu ku soo koobaya buuggiisa sidan waa:
Nabi Yuunusna wuxuu ka mid ahaa Rasuulladii (ladiray).Xus markuu kudhuuntay (kucaray) Doontii buuxday.Oo uu qoriritay nodayna mid laga reeyey. (Baddana lagu tuuray).Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.Hadduusan noqonin kuwa Eebe u tasbiixsada (xusa).Wuxuu kanagaan lahaa calooshiisa tan iyo maalinta lasoo bixin dadka.
Nebi Yuusus waxaa liqay kalluun aad u wayn maxaa yeelay wuxuu ka cararay hawshii uu Eebbe siiyay si uu ogu wacdiyo toobadda magaaladii Ninweh oo waqtigan la joogo u dhow Mosuul ee dalka Ciraaq. Aqoon yahaynka diinta Islaamka oo la yiraahdo ayaa sidan ka yiri aayadahaa:
Tani waa sarbeeb. Tani waxay ahayd aasitaankii iyo qabrigii Yoonis. Hadduusan toobad keenin ma ka bixi wayayy jidhkii liqay isaga, ilaa Maalinta soo sara kicidda ama Qiyaame , goorta Dadka dhintay oo dhan la soo sara kicin doono.
waa qoraalka Xusuusinta 4125 ee Yuusuf Cali uu ku turjumay Qur’aanka
Sidaa darteed, isagoo ku jira kalluunka dhexdiisa waxaa lagu xukumay xukun shimasho ah taasoo caadi ahaan laga sii dayn doono Maalinta Qiyaame.
Nebi Yuusus wuxuu Kitaabkiisii uu qoray sheegayaa
Kitaabka Yoonis wuxuu faahfaahin ka bixinayaa waxa ku saabsan Jiritaanka Kaluunka weyn,Wuxuuna leeyahay:
hen Jonah prayed unto the LORD his God out of the fish’s belly,
Yoonis 1: 17–2: 10
Waa maxay ‘Calaamadda Yoonis’?
Caadi ahaan waxaan fileynaa in marka qof marka awooda la looltamayo, siduu Ciise Masiix ahaan jirat, wuxuu isagu isku muujiyaa calaamad muujinaysa awood, guul ama guuleeysi. Laakiin Cise Masiix wuxuu difaacday awoodiisa isaga oo tixraacaya nabi Yoonis 3 maalmood ‘ee boqortooyada kuwa dhintay’ ‘godka’ ama qabriga. Intii lagu jiray 3-da maalmood, caasinta uu caasiyay amarka Ilaah, isaga ‘waxa laga fogeeyey aragtidaada’. Xaadirnimada Ilaah. Dhacdadii Yoonis ee ku jirtay gacanta geerida 3 maalmood ee mugdiga ah, oo xagga Alle laga reebay, maahan calaamad aannu fileynay. Waa maxay sabatuu Ciise Masiix u doortay calaamadda u muuqatay inuu Baajinaayo ama baabiinayo awoodiisa?
Tani maahan markii ugu horreysay oo daciifnimo iyo geeri loo bixiyo sida calaamad. Nebi Ishacyaah ayaa wax ka sii sheegay Imaatinkii Addoonka. Ishacyaah wuxuu sii sheegay in Addoonkan ‘la quudhsan doono’ oo ay dadku diidi doonaan ‘oo’ qaddarka Ilaah loo ciqaabi doono ‘iyo’ in laga gooyo dhulka kuwa nool ‘oo’ lagu aasi doono qabriga kuwa sharka leh ‘. Shisheeyaha weli, wuxuu ahaa “rabitaanka Sayidku inuu ku burburiyo Addoon”. Taasi waxay u egtahay sidii Yoonis soo maray – iyo siduu Ciise tilmaamay.
Garaadkaa keenay fahamku ayaa ahaa dhamaadka ducadii Yoonis intuu ku jiray caloosha kalluunka. Hadalkii ugu dambaysay ee ducadiisu waxay ahayd “Badbaadintu waxay ka timaadaa xagga Ilaah”. Waxaan soo aragnay sida magaca ‘Ciise’ uu ahaa magaca ka mid ah nebiyada ee soo socda. Laakiin waa maxay micnaha magaca ‘Ciise’? Micnaha Af Cibraaniga ayaa micnaha loola jeedaa ‘Rabbigaa badbaadiyaa’. Nebi Yoonis tukashadiisa wuxuu ku qirtay in isaga u baahan yahay badbaado kan sidaas sameeynayana waa Rabbigu. Ducadiisu waxay caddeysay baahidayada ah in la badbaadiyo iyo inuu Ilaah yahay kan badbaadinta sameeynayo. Micnaha Magaca Ciise Masiix afka Cibraanigan waxaa loola jeedaa run la mid ah in Yoonis oo kalluunka ku jira uu ugu dambeyntii qiray maadaama magaca Ciise macnaheedu yahay ‘Rabbigaa badbaadiyo’.
Ciise Masiix wuxuu hadaladiisii uu la lahaa hogaamiyayaasha diinta ku soo gabagabeeyey isagoo xusuusinaya in dadka Nenweh oo ah magaaladii loo diray Yoonis inuu wacdiyo inay rumaysteen oo ku toobadkeeneen farriinta Yoonis , laakiin hoggaamiyeyaashii dhageystay ama Maqlay Ciise Masiix diyaaruma ahayn inay toobad keenaan , Iyagoo aan raalli ka ahayn inay qirtaan badbaado inay u baahan yihiin. Waa inaan baarnaa qalbiyadeena si aan u aragno haddii aan nahay sida ragga Ninewah (kuwii toobadda keenay) oo ah hoggaamiyeyaasha Yuhuudda (midda ay sameynin). Labadaa kee baad tahay?
Waxaan sii wadaynaa inaan raacno Ciise Masiixa si aan u aragno sida calaamaddan Yoonis loo oofiyey iyo sida ‘Rabbiga u badbaadiyay’ iyo siduu howlgalka Ciise Masiix u bilaabay dhamaadkiisa.
Tags:Isa al masih iyo YoonisNebi YoonisNebi Yoonis oo ku sugan quraan iyo kitaabNebi Yunisnebi Yunis ee Quraanka iyo KitaabkaNebi YunusQuraanka iyo Kitaabkawaa al masih iyo yunusYunisYunus